Shirka Hanaanka dib u eegista Dastuurka oo ka furmaya Baydhabo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirka Hanaanka dib u eegista Dastuurka oo ka furmaya Baydhabo
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Baydhabo uu ka furmo shirka hanaanka dib u eegista Dastuurka, kaasoo uu si rasmi ah u furi doono Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Shirka Hanaanka dib u eegista dastuurka ayaa ka mid ah shirar wada tashi oo ay wado Wasaaradda, kaasoo looga qeyb galinayo shacabka iyo Maamulada dalka ka jira.
Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil oo shalay gaaray magaalada Baydhabo ayaa sheegay in shacabka Koofur Galbeed ay ka tala gelin doonaan qorshaha guud ee hanaanka dib u eegista Dastuurka
“Waxaan Baydhabo u nimid in aan madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed aan ka talo gelino Qorshaha Guud ee hannaanka dib-u-eegista Dastuurka ee ay Wasaaradda diyaarineyso; innagu waxaa inaga go’an in aan si daah-furnaan ah ugu shaqeyno dadka Soomaaliyeed waxa aana kulamo wadatashi ah la yeelan doonnaa dhamaaan qaybaha kala duwan ee bulshada Baydhabo” ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Mr Xoosh ayaa sheegay in safarkiisa uu ka mid ah yahay qorshaha Wasaaradiisa ku gaarsiineyso kulamada wadatashiga dhamaan gobolada dalka, si diyaarinta Qorshaha Guud ee hanaanka dib u eegsita Dastuurka uu u noqdo mid ka qaybgalkiisu loo dhan yahay.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inuu ka doodo dib u eegista dastuurka, marka la soo gaba gabeeyo wada tashiyada, iyadoo qorshuhu yahay in dastuurka loo qaado afti dadweyne.
Netherlands calls for UN sanctions on people smugglers in Libya